Zizowushaya maduze kumsubathi wodumo lwama-Olympics | isiZulu
Zizowushaya maduze kumsubathi wodumo lwama-Olympics
UMinnie usephawulile ngesithembiso somshado
Kuthenjiswe uMinnie umshado kwahlekiswa ngoKhune noCassper
Alusanambitheki olukaThembi Seete nesoka elamthembisa umshado
Cape Town – Unyazi lomsubathi wakuleli owawina indondo yegolide ebangeni elingu-400m kuma-Olympics, futhi ophethe irekhodi lomhlaba, uWayde van Niekerk, ucele umshado entombini yakhe asebedonse isikhathi eside nayo, uChesney Campbell.
Lo msubathi odle ngejubane uye wanikela enkundleni yezokuxhumana, i-Instagram ukuqinisekisa ngokusemthethweni ukuthi usezibophezele ukuthi uzoshada nalesi sinqandamathe sakhe.
OLUNYE UDABA: Owesifazane uzoshada nomshana ngemuva kokumkhulelisa
Yize noma kungekho mininingwane eminingi ngalokhu kodwa lo msubathi ubhale ngamagama amakhulu ngesingisi ukuthi: “Uthe yebo”, nokutolikeka njengokuthi intokazi ivumile ukumshada. Lokhu kuhambisana ne-video emfushane nalapho kubonakala isandla esibukeka njengesomuntu wesifazane egqoke indandatho emunweni wendandatho.
UVan Niekerk kanye noCampbell bebelokhu bechitha isikhathi samaholidi asehlobo bese-United Kingdom njengoba lo msubathi oneminyaka engu-25 ubudalala ephinde wathola nethuba lokubuka bukhoma iqembu azifelayo ngalo, iLiverpool.
“Ningezi nonke kodwa nize ngobuningi benu”
Lesi yisona siqubulo soMcimbi ohlelwe nguSomahlaya uSimphiwe Shembe eThekwini ngeSonto.
UKhaya uthi wayazi ukuthi uNtando ungumaqondana wakhe
Umculi nombhali wezingoma uKhaya Mthethwa uthi wayazi ukuthi akusamele aqalaze kwenye indawo ngemuva kokuba abonane nalowo owayenguZime wakuleli.
Kungenwa mahhala emcimbini ozobe ubophele ngoKhuli Chana nabanye eThekwini
Umrepha wakuleli uKhuli Chana uzozungeza izwekazi lase-Afrika nabanye abaculi njengoba eseqokwe njengenxusa le nkampani ekhiqiza ugologo.
Kudutshulwe kwabulawa abasolwa abayisikhombisa eNgcobo
URamaphosa wakha isithabathaba somuzi eKapa - Umbiko
Badutshulwe besesontweni abasolwa abayisikhombisa eNgcobo
Umunyu isoka likhombisa umndeni lapho "elagqiba" khona intombi
Cpt: 14-21°C Pta: 18-28°C
Jhb: 15-25°C Bloem: 10-23°C
Dbn: 17-19°C PE: 15-22°C
Bruma - 18:25:01 PM TRAFFIC LIGHTS not working at Marcia Street Ezinye zasemigwaqeni